Ny indostrian'ny fizahan-tany amerikana dia tokony hamaha ny banga fitokisana amin'ny mangarahara amin'ny vidiny, fiarovana COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny indostrian'ny fizahan-tany amerikana dia tokony hamaha ny banga fitokisana amin'ny mangarahara amin'ny vidiny, fiarovana COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Any Etazonia, ireo lafin-javatra roa lehibe indrindra amin'ny fananganana ny fahatokisan'ny mpanjifa an'ireo maso ivoho mpizahatany sy ireo mpamatsy dia, toa ny zotram-piaramanidina, dia tsy manana «sarany miafina» sy «vokatra azo ovaina na azo averina tanteraka».
Ny ankamaroan'ny mpitsangatsangana amerikana nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia nilaza fa ny indostrian'ny fizahan-tany dia nahavita tsara tamin'ny fampiharana ny fepetra momba ny fahasalamana sy fiarovana COVID-19.
35% amin'ireo mpandeha amerikana no nitatitra fa matoky ireo orinasan-dia izy ireo amin'izao fotoana izao hampiasa ny mombamomba azy ireo amin'ny fomba mety.
Ny fikarohana dia nahitana porofo koa fa misy fiantraikany mivantana amin'ny fividianana ny fahatokisana.
Araka ny fikarohana tsy miankina vaovao, ny indostrian'ny fizahan-tany dia afaka manatsara ny fahasitranana manerantany amin'ny alàlan'ny fiatrehana ireo banga fahatokisan'ny mpanjifa ny mangarahara amin'ny vidiny, fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana COVID-19, tsiambaratelo momba ny fiainana manokana ary fahatokisana ny fampahalalana.
Ny banga efatra fahatokisana
Ny fandalinana mpitsangatsangana 11,000 manerana ny firenena 10, ao anatin'izany ny 1,000 any Etazonia, dia notarihin'i Edelman Data & Intelligence (DxI), sampana fikarohana sy famakafakana nataon'i Edelman, izay nandalina fitokisana nandritra ny 20 taona mahery tamin'ny alàlan'ny Edelman Trust Barometer. Tany Etazonia, dia nanambara ireo lafin-javatra roa lehibe indrindra amin'ny fananganana fahatokisana ny mpanjifa amin'ny maso ivoho mpizahatany sy ny mpamatsy dia, toy ny zotram-piaramanidina, tsy manana "sarany miafina '(64%) sy" vokatra azo ovaina na azo averina tanteraka' (55%). Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny mpandeha dia mahita fa mahantra ny zava-bitan'ny indostria amin'ireo faritra roa ireo (67% sy 61%). Ireo mpitsangatsangana amerikana dia isan'ireo diso fanantenana indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny elanelam-potoana 31 sy 16 isan-jato lehibe manelanelana ny lanjan'ireo zava-dehibe roa ireo.
2. COVID-19 Fahasalamana sy fiarovana
Ny maro an'isa (52%) amin'ireo mpandeha amerikana nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia nilaza fa ny indostrian'ny fizahan-tany dia nahavita tsara tamin'ny fampiharana ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana COVID-19. Ny fandrosoana, na izany aza, manodidina ny antsasaky ny filazany dia te hanome toky bebe kokoa izy ireo amin'ny fomba hentitra ampiharina ny fepetra sasany, indrindra ny fanatsarana ny filtration ny rivotra, ny fanalavirana ny fiaraha-monina ary ny fitantanan-draharaha sy ny filaharana.
3. Privacy Data
Ny tsiambaratelo momba ny fiainam-pirenena dia olana lehibe iray nasongadin'ilay fikarohana. Latsaky ny efatra amin'ny mpitsangatsangana amerikana (10%, raha ampitahaina amin'ny 35% manerantany) no nitatitra fa matoky ireo orinasan-dia izy ireo amin'izao fotoana izao hampiasa ny mombamomba azy ireo amin'ny fomba marina. Manerantany dia hita miharihary izany teo amin'ireo Baby Boomers (40%) sy Gen Z (33%).
Raha miresaka momba ny fampahalalana manokana ny zavatra niainany, dia nilaza ireo mpandeha lavitra any Etazonia fa mahazo aina indrindra amin'ny orinasa mampiasa angona izay nozarain'izy ireo tamin'izy ireo tamina resaka iray (46%), fitondran-tena taloha (44%) ary hetsika tsy fivadihana (44%). Tsy dia mahazo aina izy ireo, na izany aza, rehefa misy loharanom-baovao voaray ankolaka, ohatra, amin'ny alàlan'ny hetsika media sosialy (26%), rakitsoratra ho an'ny daholobe toy ny naoty (31%) ary ny fiantsenana taloha, ny fikarohana sy ny famandrihana amin'ny orinasa hafa (35%).
4. Fahalalana momba ny fampahalalana
Araka ny fikarohana, ny loharanom-baovao marim-pototra azo antoka momba ny dia izay ampiasain'ny mpitsangatsangana any Etazonia rehefa mikaroka dia izy ireo no manana fahalianana mifanaraka: namana sy fianakaviana (73%), miaraka amin'ny loharanom-baovao azo antoka farany momba ny tranonkala famerenana. tonga lavitra any aoriana (46%). Mifanohitra amin'izany, ny tsy atokisana indrindra dia ireo izay manana fahalianana mazava amin'ny varotra, toy ny influencers media sosialy (23%) sy ny olo-malaza (19%). I Gen Z indray dia naseho fa tsy matoky ny ankamaroan'ny sokajy manerantany.
Tantara mitovy amin'izany no nilalao rehefa nandinika ny fahatokisana ireo karazana fampahalalana mifandraika amin'ny dia. Ny laharan'ny mpanjifa (52%) ary ny hevitry ny mpanjifa an-tsoratra (46%) dia iray amin'ireo mpizahatany matoky indrindra eto Etazonia. Na izany aza, ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo (34%), ny sarin'ny vokatra toy ny efitranon'ny hotely nomen'ny orinasan-dia (37%), ary ny laharana fahatelo toy ny rafi-kintana hotely (39%) dia nambara fa tsy atokisana indrindra.
Mampandeha ny antsinjarany
Ankoatry ny famaritana ireo banga amin'ny fifampatokisana, ny fikarohana dia nahitana porofo koa fa ny fitokisana dia mitaona mivantana ny fitondran-tena mividy. Noho ny COVID-19 dia efa ho ny antsasaky ny (49%) mpivezivezy amerikana ankehitriny, ohatra, no naseho nanao laharam-pahamehana ny fahatokisana ny anton-javatra hafa rehetra rehefa nifidy mpamatsy fitsangatsanganana. Mpandeha maro ihany koa no nilaza fa rehefa mipetraka ny fifampitokisana dia handinika ny fividianana entana mifandraika amin'ny dia (50%) izy ireo, ny fanavaozana ny fonosany (40%) ary ny fividianana entana tsy misy ifandraisany amin'ny Travel toy ny carte de crédit (29%).